Ipulaphu eliphuzi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ipulaphu eliphuzi
Ipulaphu eliphuzi. Izinhlobo ezinhle kakhulu. Ukunakekela nokufika
Ngombono wethu ojwayelekile, iplamu kufanele ibe njalo eluhlaza okwesibhakabhaka noma ephuzi. Uma kuziwa ngamapulumu aphuzi, khona-ke ngesizathu esithile umuntu wonke ucabanga ngokushesha ngeplamu. Eqinisweni, kunezinhlobonhlobo eziningi ze-plums eziphuzi, ezihlukile ku-cherry plum hhayi nje ekunambithekeni, kodwa nangesayizi yazo. Mayelana nezinhlobonhlobo ze-plums ephuzi futhi sizoxoxwa kulokhu kulesi sihloko.
Incazelo kanye nokunakekelwa kwe-plums "Morning"
Akumangalisi iplamu ibhekwa njengenye yezindawo "ezakhamuzi" ezithandwayo kakhulu zensimu. Kuyinto enganaki ekunakekeleni futhi inikeza inani elikhulu kakhulu lezithelo ezinomsoco namanzi, ezithandayo abadala nabantwana. Namuhla, kunezinhlobonhlobo eziningi ze-plums, kanti i-Morning ehlukahlukene ayiyona eyokugcina ngokuthandwa, ukutshala nokuzinakekela kuyoba yinto ebalulekile yokunakwa kulesi sihloko.